China Export 2020 chirimwa chitsva cheapuro muchero nemutengo wakanaka vagadziri uye vanotengesa | AGR
1.Apple chibereko chinotapira, chinodyiwa chemuti Malus domestica. Chibereko chakatenderera chinogona kuuya nemhando dzakasiyana uye nemavara
seyero, girini kana tsvuku. Maapuro anowanzo kutapira uye cam inodyiwa nyowani kana kushandiswa muzvikafu, sosi, kupararira, majusi kana
pie yakakurumbira yemapuro. Mbeu yeapuro inogona zvakare kupwanywa kubvisa mafuta, ayo anoshandiswa muindasitiri yezvizoro. Chibereko chine macarbohydrate, shuga uye faibha ine mashoma mapuroteni nemafuta.
Maapuro eFuji anozivikanwa nehukuru hwayo, tsvuku kwese kwese, yakatenderera chimiro, uye saizi saizi sebhora. 9-11% yehuremu hwemuchero uyu monosaccharides, uye nyama yayo yakaumbana, inotapira uye yakasviba kupfuura mamwe akawanda marudzi emaapuro, saka inodiwa zvakanyanya nevatengi pasirese.
Inofananidzwa nemamwe maapuro, maapuro eFuji ane akanyanya kurebesa zuva risati rasvika uye haatombodi kuchengetwa mufiriji. Iyo inogona kuchengetwa kwenguva yakareba pakamuri tembiricha. Kana maapuro akanyoroveswa mu5% mvura yemunyu kwemaminetsi gumi, akaomeswa, akaisa muhombodo nyowani-yekuchengetedza, akaiswa chisimbiso uye akaiswa mufiriji, tembiricha inodzorwa pa0-40 ℃, uye inogona kuchengetwa kweinopfuura mwedzi mishanu .
Chinonaka uye chinotapira, michero yemuapuro ndeimwe yemichero inonyanyo kufarirwa uye inodiwa pakati pevanoziva nezvehutano, vanofarira kugwinya vanotenda zvakasimba mune pfungwa ye "hutano hupfumi." Ichi chibereko chinoshamisa chakazara nefuma phyto-zvinovaka muviri izvo, mupfungwa yechokwadi, yakakosha kune hutano hwakakwana.
Chinonaka uye chinotapira, michero yemuapuro ndeimwe yemichero inonyanyo kufarirwa uye inodiwa pakati pevanoziva nezvehutano, vanofarira kugwinya vanotenda zvakasimba mune pfungwa ye "hutano hupfumi." Ichi chibereko chinoshamisa chakazara nefuma phyto-zvinovaka muviri izvo, mupfungwa yechokwadi, yakakosha kune hutano hwakakwana. Mamwe ma antioxidants muapuro ane hutano hwakawanda hunosimudzira uye hwekudzivirira zvirwere, uye nekudaro, zvichipembedza chirevo, "apuro pazuva rinoita kuti chiremba abve."
Zvadaro: China Wholesale Yepamusoro Yemhando Yemakwikwi Mutengo Mutsva Apple
China Wholesale Yepamusoro Yemhando Yemakwikwi Mutengo ...